Sida loo rakibo ROM-ka webka ee ku jira Android | Androidsis
Mustaqbalka "biligleynaya" ama rakibida ROM-ka ayaa maraya iyada oo la adeegsanayo shabakad internet
Waqti wanaagsan 'ol taas oo Rakibaadda ROM-ka ayaa muhiim u ahayd si loo helo taleefan deggan oo aan lahayn dhibaatooyin daran khibradda isticmaalka maalinlaha ah. Hadana haddii aan dhex marnay rakibaadda feylka 'microSD drive', mustaqbalka dhow xaqiiqda ah "bilig bilig" ama rakibaadda ROM-ka ayaa maraya shabakadda internetka.
Marka wax walba waxay noqon doonaan khadka tooska ah iyo uma baahan doonno wax ka badan biraawsar is waafajin kara inaad awood u yeelatid inaad cusbooneysiiso cusbooneysiin ama aad ku rakibto qalab adag oo uga tagaya sidii hore warshad. Marka laga soo tago xaqiiqda ah in qaar badan ay weli soo jiiteen baahi ama si fudud raalli ahaanshaha inay isku dayaan waxyaabo kale markii waqtigaasi dhammaaday oo aynaan waxba taaban.
1 Ku rakibida ROM cusub
2 Ka ifinta ROM-ka websaydhka
3 Adeegsiga daalacashada ku saleysan Chromium
Ku rakibida ROM cusub
Kuwa naga mid ah ee loo isticmaalay in lagu rakibo qalab ama ROM-ga caadiga ah mid kale oo wajahnaa waa wax iska caadi ah oo aan u aragno wax khatar ah, laakiin waa run in adeegsadaha cusub ee markii ugu horeysay sameeya, waqtiga lagu cuni karo qabashadiisa ay ka badan karto dhibaato daran.
Y. in xitaa loogu talagalay isticmaaleyaasha horumarsan xitaa ficilada fudud sida PC-ga oo aqoonsanaya qalabka Waxay noqon kartaa wax caqabad ah, taasina waxay udhaxaysaa dagaal u dhexeeya mashiinka-mashiinka si loo arko cida waxbadan qaban karta.
Si kale haddii loo dhigo, si looga fogaado dhammaan dhibaatooyinkaas, waxay umuuqataa inaan gacanta ku heyn doonno suurtagalnimada in ROM lagu rakibo shabakadda. Waana taas Wax walba waxay bilaabeen inay isbedelaan markii Google daabacday qalabkeeda Android Flash iyada oo ah isku day lagu doonayo in lagu rakibo ROM-ka mid fudud qof walbana wuxuu isticmaali lahaa isla aaladdii.
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan sanadahaas ayaa ah inay durba bilowday inay taas hoos u dhigto ku sameynta iyada oo loo marayo shabakadda waxay noqon doontaa habka ugu fudud iyo waxsoosaar dhammaan wixii la qaban lahaa. Waana in habka laftiisu ka kooban yahay in badan oo laga soo degsado sawirka si looga soo raro ROM-ka loona adeegsado amarrada ka imanaya kombuyuutarka noo oggolaanaya inaan ku dhaqaaqno tallaabadaas. Laga soo bilaabo shabakadda wax walba waa la hagaajin lahaa si looga dhigo mid aad u fudud.
Ka ifinta ROM-ka websaydhka
Qalabka Google wuxuu bixiyaa iswaafajin ku rakibida ROM ka shabakada, laakiin waa mid xaddidan oo kaliya ka shaqeeya qalabka qaarkood, oo kaliya sawirada AOSP iyo xirmooyinka rasmiga ah ee rasmiga ah ayaa la rakibi karaa.
Adeegsiga daalacashada ku saleysan Chromium
Nooca tijaabada ah ee rakibeyaasheena shabakadda ee GrapheneOS hadda waa la heli karaa:https://t.co/29OBsANCta
Tan waxaa loo isticmaali karaa daalacayaasha taageerada WebUSB. Inta badan daalacashada Chromium-ku-saleysan waa la taageeraa oo ay ku jiraan Chrome, Edge iyo Brave. Looma baahna in la ordo wax barnaamij dheeri ah.
- GrapheneOS (@GrapheneOS) January 24, 2021
Lin sidoo kale waxay u qorsheysay rakibaha shabakadda mashruuc cusub oo diirada saaraya asturnaanta loo yaqaan GrapheneOS. Haddii aan ognahay in Chromium ay bixiso taageerada WebUSB illaa nooca 61, baare kasta oo ku saleysan Chromium, sida Chrome ama Microsoft Edge, oo lagu rakibay PC, wuxuu isticmaali karaa aaladda biligleynaya.
Windows-ka waxaad u baahan tahay darawal gaar ah oo isla markiiba la soo dejin doono by Windows Update, sidaa darteed wax dhibaato ah nagama la kulmi doonto markay tahay la tacaalidda qalabkan khadka tooska ah lagu rakibo ROM-yada caadiga ah.
Kani waa iskuxiraha keydka fastboot.js, kaas oo leh waxa la yidhi iyo daalacashadaas ayaa ka daaran kara ROM-yada raaxada webka adigoon wax kala soo dagin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Mustaqbalka "biligleynaya" ama rakibida ROM-ka ayaa maraya iyada oo la adeegsanayo shabakad internet
Samsung ayaa bilawday cusbooneysiin ku saabsan Galaxy Buds Pro iyada oo lagu hagaajinayo joojinta buuqa
New Samsung Galaxy F62 oo leh 7.000 mAh batari: qaababka, qeexitaanada iyo qiimaha